🥇 ▷ Riyo Quantic ayaa muujinaya sida Detroit: Noqo muuqaalka aadanaha ee PC ✅
Riyo Quantic ayaa muujinaya sida Detroit: Noqo muuqaalka aadanaha ee PC
Riyo Jacayl wuxuu muujiyey ciyaarta ugu horeysa ee cinwaankiisa la rajeynayo Detroit: Noqo Aadam, cinwaan u gaar ahaa PlayStation ilaa Dukaanka Ciyaaraha Epic Wuxuu si gaar ah ugu keenay PC. Nasiib darrose, waxaan wajahaynaa shax aan caadi aheyn oo aan xitaa gaarin xitaa nus daqiiqo, laakiin waa inaan aqoonsana taas dhinaca muuqaalka ciyaarta ayaa balan qaadaya inaan qofna niyad jabin.
Mid ka mid ah awoodaha, iyo wanaagga, ayaa ah in daraasadda ayaa soo saaray nooca PC-ga gabi ahaanba iyadoo la adeegsanayo Vulkan API, wax macquul ah oo tixgalinaya in Sony console uusan socodsiin DirectX API. Dhanka kale, shuruudaha waa kalabar la awoodi karo haddii aan tixgelinno nooca console-ka, halkaas oo ay si weyn u xaddidan tahay marka la eego xagga CPU iyo karti kasta oo laga sooci karo kaarka sawirrada.
U safri magaalada waaweyn ee Detroit sanadkii 2038: magaalo dib loo soo nooleeyay horudhacyo barnaamijyo horudhac ah oo android ah oo jira kaliya si loogu adeego aadanaha. Laakiin waxaas oo dhami inay isbaddalaan…
Tag maqaarka saddex nooc oo android ah oo ku nool “adduun faraxsan” oo xannibmay qarka qarka. Go’aannadaada ayaa si weyn wax uga beddeli doona koorsada ay qaadatay sheekada xiisaha leh ee caanka ku ah ciyaarta. Kumanaan xulashooyin iyo daraasiin dhammaadyo macquul ah, sidee falalkaagu u saameyn doonaan mustaqbalka Detroit?
Shuruudaha ugu yar Shuruudaha lagu taliyay
Windows 7 64 xoogaa Windows 10 64 bit
4 GB oo RAM ah 12 GB oo RAM ah
Nvidia GeForce GTX 660 ama u dhigma Nvidia GeForce GTX 1080 ama wax u dhigma